LG G4 မှပြနာများ - touch screen သည်သင့်တင့်သလိုတုံ့ပြန်မှုမရှိပါ Androidsis
Cristina Torres နေရာချထားပုံ | | LG
စာဖတ်သူအများစုကစဉ်းစားနေပုံရသည် LG G4 ကိုဝယ်ပါ။ စင်စစ်အားဖြင့် high-end ရှိလက်ရှိရွေးချယ်မှုများအတွင်း၎င်းသည်ရရှိနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်စျေးနှုန်းအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် LG က Sony ခံစားခဲ့ရသည့်ပြproblemနာကိုကျော်လွန်သွားပြီး Samsung ချစ်ပ်သည် Core chip ကိုအပူလွန်ကဲခြင်းအတွက်အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်ဟုအရာအားလုံးကညွှန်ပြနေပါကယခုဝယ်ယူမှုအားပြန်လည်စဉ်းစားနိုင်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာသံသယအသစ်များပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ LG G4 မှာ core နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမမှားပေမယ့် touchscreen ပေါ်ကအရာတွေကသူတို့လုပ်သင့်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူး။
နောက်ပြီးသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပြproblemsနာတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြမယ့်ဗီဒီယိုအချို့ကိုပြပါမယ် LG G4 မျက်နှာပြင်တစ် ဦး မဟုတ်ဘဲရှုပ်ထွေးဖြေရှင်းချက်ရှိနိုင်သည့်, သော။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီကမှတ်ချက်မပေးသေးပေမယ့်သုံးစွဲသူတွေရဲ့တိုင်ကြားချက်တွေကတော့ဟာ့ဒ်ဝဲကိုယ်တိုင်နှင့်ဆက်နွှယ်နေတဲ့ပြတ်ရွေ့တစ်ခုလို့ယူဆရနိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်၌ဤဖုန်းတစ်လုံးရှိပြီးသားဖြစ်ပြီး၊ သင့်မော်ဒယ်ကပြproblemsနာများကိုမပေးလိုကြောင်းသေချာစေလိုလျှင်၊ သင့်တို့ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကိုစမ်းသပ်ရန်သင်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုလည်းပြသပါမည်။
ဖိုရမ်အတော်များများတွင် developer များသည်ပြinနာများကိုဖော်ပြခဲ့သည် Touchscreen တုန့်ပြန်မှု LG G4 ခံစားခဲ့ရ။ အောက်ပါဗီဒီယိုများတွင် terminal အသစ်နှင့်အသုံးပြုသူအချို့မည်သို့ဖြစ်သွားသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်မှအသံထွက်ထွက်လာရန်စောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းပြproblemနာသည်ဖုန်း၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူများစွာသည် screen protectors များမသုံးပဲမည်သို့ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့အောက်ပါဗီဒီယိုများကိုကြည့်ပြီးသင့်ကောက်ချက်ဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ LG G4 ၏ထိတွေ့မှုကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း။
သင့်ရဲ့ယခုအချိန်တွင်လျှင် LG G4 terminal ကို ဤအမှားများကိုသင်မတွေ့ရပါ၊ သို့သော်အနာဂတ်တွင်သင်၌ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ကိုသင်ကြောက်ရွံ့ပြီးသင်၏ terminal မှပြန်လာခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုရှောင်ရှားလိုသည်၊ သင်အလျင်အမြန်မပြုမီကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည့်အဆင့်များကိုကြည့်သင့်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်၏မျက်နှာပြင်ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်တုံ့ပြန်မှုမရှိသည့်ထိတွေ့ဇုန်ရှိ၊ မရှိကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့နောက်ခေါင်းစဉ်နှင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်သည် -
၀ န်ဆောင်မှုမီနူးကိုဝင်ရောက်ရန် terminal ကိုပေါ်ရှိနံပါတ် 277634 # * # ကိုနှိပ်ပါ။
ကိရိယာစမ်းသပ်ခြင်း -> ဝန်ဆောင်မှုမီနူး - လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆေးခြင်း -> ထိတွေ့ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း - လက်စွဲကိုနှိပ်ပါ။
သင်လုပ်နေကျစမ်းသပ်မှုareaရိယာတစ်ခုလုံးကိုထိပုတ်ပါ / ပွတ်ဆွဲပါ၊ ၎င်းသည်လုံးဝမပြည့်မချင်းအထိခေါက်ပါ၊ သို့မှသာမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသည့်ထိများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
ရသည်မှာနှင့်အတူပြproblemsနာများ LG G4 တို့ထိဖန်သားပြင် ၎င်းတို့သည်အချို့သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အမူအရာများတွင်သီးသန့်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ပွတ်ဆွဲမှုဖြစ်ရပ်တွင်တိုင်ကြားမှုသည်မကြာခဏဖြစ်သည်။ သင်သည်ဤအကြောင်းပြချက်အတွက်သင်ယခင်ကမတွေ့ရှိခဲ့ဖူးပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ဤတိုင်ကြားချက်ကိုအခြေခံသောအမှားပြတ်သော terminal များဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင် LG မှကြေငြာခြင်းမပြုလုပ်မှီနိဂုံးချုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ဤအချိန်အတောအတွင်းအနာဂတ်၌ပြproblemsနာများကိုသင်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ပြီးတော့သင်ပြီးသွားလျှင်သင်လိုချင်လျှင်မှတ်ချက်များအားဖြင့်ရလဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G4 ပေါ်ရှိပြနာများ - တို့ထိတဲ့ touch screen ကမတုံ့ပြန်ဘူး
ငါနဲ့ငါ့မှာ g3 ရှိတယ်၊ lg နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုနဲ့အတူသုံးလကျော်ဖုန်းပြန်လာပြီးအာမခံချက်ကိုမပြီးဘဲဆင်ခြေမပေးဘဲပြတ်တောက်သွားပြီးငါ့ကိုမအံ့သြမိလို့မျက်နှာပြင်ပိတ်သွားတယ်။ ငါဒီဇိုင်းနှင့်အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြိုက်ပေမယ့်အလွန်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကုသမှုကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ဒီအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုခုကိုဝယ်ဖို့လိုလိမ့်မည်။
ဝေဟင်လား Blendgate? ပြင်းထန်သောပန်းသီးဂိုဏ်းသည်အလွန်ဝါသနာပါသည်
ငါစမ်းသပ်မှုလုပ်ပြီးသွားပြီ၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုမလုပ်ခင်တခါတရံထိတွေ့မှုအချို့ကအဲဒါကိုသူတို့မတွေ့ပေမဲ့ဒီနေရာမှာအလေးအနက်မထားဘူးဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အလွန်အချိန်တိကျသောထိတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါအနာဂတ်အတွက်ပြproblemsနာများချင်ကြဘူးသောအရာကို။ အဲဒါကိုပြောင်းဖို့အကြံပေးပါသလား
ငါပြန်လာပြီ မျက်နှာပြင်အလယ်၌နှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်မပြေပါ။ အချို့ရဲ့ထိပ်မှာသူတို့ကအစက်အပြောက်အချို့ကိုရ။ ပိတ်ပါနဲ့သွားကြကုန်အံ့ !!!
ကျွန်ုပ်တွင်ဤပြissueနာနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျတဲ့ပြspecificနာတစ်ခုရှိသော်လည်းအားလုံးအထက်ကအရမ်းပူလာပြီးကျွန်ုပ်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ပင်သယ်ဆောင်။ မရပါ။ အဲဒါငါ့မှာဒုတိယပဲ ငါနောက်တစ်ခေါက်ပြောင်းမလားမသိဘူး
ကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကဝယ်ခဲ့သော lg g4me နှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အကျွံအပူလွန်ကဲသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးနီးပါးကိုပိတ်ထားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဆက်လက်ရှိနေပြီး task bar ကိုအောက်သို့ချသောအခါသို့မဟုတ်၎င်းကိုမြန်မြန်ကိုင်တွယ်သောအခါပြန်လည်စတင်သည်။
တစ်နေ့ငါအကြိမ် ၂၀ ကဲ့သို့ပြန်လည်စတင်သည်
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မလားငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါက LG G4 သို့မဟုတ် S6 ,,, ဒါမှမဟုတ်ကြောင်း sony ပျက်ကွက်, တကယ်သံသယဖြစ်ခဲ့သည်, ဤဖတ်နေငါငါ့စာရင်းထဲကဒီ terminal ကိုစွန့်ပစ်။ ငါ LG G2 ကိုပြုပြင်နေပြီ။ ဘယ်နေရာမှမရှိဘူး၊ ထိလိုက်တာကပြတ်တောက်သွားတယ်။ ၄ င်းသည်ရုပ်မြင်သံကြားအဟောင်းတစ်ခုနှင့်တူသည်။ လွန်ခဲ့သော ၄ ရက်ခန့်ကသူသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရှိခဲ့သည်။ (အာမခံချက်အတွင်းတွင်အသုံးပြုမှုသည် ၈ လသာရှိသည်။ ထိခိုက်မှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဂရုစိုက်သောကြောင့်) တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီကသူတို့အပိုပစ္စည်းတစ်ခုမျှော်လင့်ပြီး ၅ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်ထံပို့ပေးလိမ့်မည်ဟုပြောခဲ့သည်။ အပိုပစ္စည်းမရရှိလျှင်အခြားရွေးရန်ကျွန်ုပ်ကိုငွေပေးမည်။ LG ကိုကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ G4 ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ terminal တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်သူ့ touch screen နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ငါတော့ဘူးလို့ငြင်းချင်တယ်။
Noe S. သို့ပြန်သွားရန်
ငါ့မှာ LG G4 H-815 ရှိတယ်။ သုံးလအကြာမှာဖန်သားပြင်က pixelated ဖြစ်နေပြီးအကြိမ်များစွာပြန်လည်စတင်လာပြီ။ အရမ်းပူလာတယ်။ LG ကိုပို့လိုက်ပြီ၊ သူတို့ကထပ်တူထပ်မျှပြန်ပေးလိုက်တယ်။ ငါထပ်မံပေးပို့ပြီး LG ကနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကိုဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှာထားခဲ့ပေမယ့်မရောက်ရှိသေးကြောင်း၊ စာပို့သူကဘာမှမသိပါဘူး (ကျွန်ုပ်ဇာရာဂိုဇာတွင်နေထိုင်သည်) ကျွန်ုပ်တိုင်ကြားနိုင်သည့်နေရာကိုမည်သူမဆိုသိရှိပါသလား။ သို့မဟုတ်စားသုံးသူအနေဖြင့်မည်သည့်အခွင့်အရေးများရရှိထားပါသနည်း။
ချစ်ခင်ရပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ LG G4 အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်၊ အက်ပ်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ချပါ။ စကားပြောဆိုမှုမှတ်တမ်းတင်ရန်။ နောက်ထပ်မိနစ် ၄၀ ထက်ပိုသောဖုန်းခေါ်ဆိုပါက APP သည်တက်ကြွလှုပ်ရှားနေပြီးကျွန်ုပ်၏ခေါ်ဆိုမှုကိုမျက်နှာပြင်တွင်အေးစက်စေသောပစ္စည်းကိရိယာသို့ဖြတ်လိုက်သည်။ ငါဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ယခုအချိန်အထိအဆင်မပြေပါ။ အိုင်တီပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်လည်းရရှိသည်။ ငါသူ့ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုယူ။ သူတို့ကတ်ကငါ့ကိုပြောပြတယ်
ငါနှစ်ရက် G4 ရှိခဲ့တယ်။ ငါ G2 မရှိတာနဲ့တိုင်ကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ငါအရမ်းဝမ်းသာသွားတယ်။ ငါပြောတာဘာမှမရှိဘူး ... ငါနှစ်ယောက်စလုံးကိုအရမ်းကျေနပ်တယ်။ ကျွန်မယောက်ျားမှာ G3 ရှိပြီးပြည့်စုံတယ်။ အခုမိုဘိုင်းဖုန်းအားလုံးမှာပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်တဲ့နွေးထွေးမှုပြ...နာ ... g4 ကသိပ်မလုပ်ပေးပေမယ့် ...
Ola ငါတွင် sony m4 ရှိပြီး၎င်းသည်မှားယွင်းသောကြောင့်၎င်းကိုငါပြောင်းလဲမည်။ ကျွန်ုပ်မရသေးသော lg g4 ကိုသင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးသင်ကကျွန်ုပ်ကို cushing လုပ်နေသည်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကောင်းကောင်းလုပ်နေသည်။
ကျွန်တော့်အတွက်တစ်စုံတစ်ခုလုပ်နေတာမြင်ရတဲ့အချိန် (နောက်ဆက်တွဲ) ဒီပြLEနာကို G4 နဲ့ငါရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော့်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်၊ တချို့ကဒီအစီအစဉ်ဟာမှားနေတာ။
Joseluis Cervantes ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့် LG g4 အရမ်းပူလာတယ်။ မဆိုဖြေရှင်းချက်ပေးပါ
joseluis ကို Cervantes အားပြန်ပြောပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ငါ Lg G4 ကိုနှစ်ပတ်ကြာအောင်လုပ်ပြီးသည်အထိငါ ၀ မ်းမြောက်မိတယ်။ ဒီနေ့ငါဖန်သားပြင်မျက်နှာပြင်ကိုတင်လိုက်ပြီး "double hit" ကဖွင့်ဖို့မလုပ်တော့ဘူး။
မျက်နှာပြင်ကိုစျေးပေါသော eBay မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါကိုယ်တိုင်အကြောင်းကြားပြီးဖန်သားပြင်အားလုံးသည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်းမဟုတ်ပါ။
ငါ့မှာ LG G4 Telcel သုံးလုံးကြာတယ်။ TELCEL ကငါ့ကိုပြောင်းတယ်။ အရမ်းပူတယ်။ ထိုသို့ပြုဆက်လက်။ ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုမဝယ်ပါနဲ့။
LG G3 နေ့ချင်းညချင်းသင်ဖန်သားပြင်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်နှိပ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ။ ငါစမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ပြီးညာဘက်မှာရှိတဲ့ quadrants ထဲမှာ pulsation မရှိဘူး။ ၁၄ လအကြာမှာပျက်သွားခဲ့တဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းယူရို ၃၇၀ ။ သူတို့ပြောတာတွေကိုလိမ္မော်ရောင်၊ LG လား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါသိတာလားကြည့်ရအောင် ... စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ် ...
ငါ lg g3 စည်းချက်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လကထိတွေ့မှုမရှိခြင်း၊ hard reset လုပ်ခြင်းနှင့်ဘာမှမလုပ်ပဲပြင်ပခလုတ်များသာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ mercadolibre ရဲ့ထိတွေ့မှုကိုဝယ်လိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပဲ။ အမေရဲ့အခြားသော LG g3 မှာ touch panel ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ Motherboard ဟာ့ဒ်ဝဲပြproblemနာ (သို့) ဗိုင်းရပ်စ် (သို့) firmware ပြjustနာတွေပဲဖြစ်တယ်။ ရယ်စရာကောင်းတာက culular ကိုကွန်ပျူတာ (သို့) transformer နဲ့ USB ချိတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်၊ ဆဲလ်ဖုန်းရဲ့ touchscreen ကတုန့်ပြန်ပေမယ့်မှားယွင်းမှုရှိပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့မှားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်မှားသွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ကိုတရုတ် LG l3 gXNUMX ရောင်းလိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုပိုဆိုးစေတယ်၊ ​​ဒါကနှစ်ဝက်လောက်ပဲသုံးတယ်။
ငါမှာဗီဒီယိုတွေဖွင့်တဲ့ lg car stereo တစ်ခုရှိတယ်၊ ဒါကတခဏမှနောက်တစ်ခုသို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် LG သည်လက်ရန်းသည်တရုတ်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ g4 သည်မျက်နှာပြင်၏ထက်ဝက်မျှအနက်ရောင်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိနိုင်ပါ၊ ၈ လဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌လွန်ခဲ့သော ၄ လက LG G4 ရှိခဲ့သည်။ ယခင် ၀ င်းဒိုးမှအစက်များသည်သတိပေးဘားတွင်ပေါ်လာသည်အထိအဆင်ပြေပါသည်။ ကူညီကြပါ
Maria S. သို့ပြန်သွားရန်
သန့်ရှင်းသောငိုကြွေးမြည်တမ်းမှုများ .. lg g2 သည်ကျွန်ုပ်အားအပူပြproblemsနာများနှင့်ပြန်လည် reboot များကိုတစ်ခါမျှမပေးခဲ့ဘဲအကောင်းဆုံးသောစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေတာသို့မဟုတ် WiFi ကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ထားခြင်းဖြင့်ဘက်ထရီသည် ၂ ရက်အထိကြာရှည်ခဲ့သည်။ lg g2 ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါ၊ တကယ့်စက်တွင်လည်းဘက်ထရီသည် ၆ နာရီကြာသော်လည်းပြproblemနာရှိသော်လည်းတစ်နေ့လုံးဒေတာနှင့်အတူ ၁၄ နာရီ ၃၀ မိနစ်ကြာမြင့်သည်။ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်း lg g4 ၏အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း ... သံမဏိပြားခြင်းဖြင့်ပရိုဆက်ဆာသည် galaxy s6 ထက်နိမ့်နေနိုင်သည်။ သို့သော်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးကိုစမ်းသပ်သည့်အခါသတိမထားမိဘဲ ... lg g14 အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်း
Cristian castro ဟုသူကပြောသည်
ငါ lg4 stylu ကိုဒုတိယနေ့၌ ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပြင်ဆင်ချိန် ၃ နာရီတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ တတိယမြောက်မျက်နှာပြင်မှာကြည့်မကောင်းသောအရာ၊ အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်ယခုပြproblemနာနှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ lg3 ကိုထိခိုက်သည်၊ ဆဲလ်ဖုန်းများကိုရုပ်မြင်သံကြားဖြင့်ပြန်လည်ပြသသည်။
Cristian Castro အားပြန်ပြောပါ
Daniel Toledo Castro နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ G4 H815P Series6သားရေအနက်ရောင်ရှိတယ်။ ဘက်ထရီက ၁၄ နာရီပဲကြာတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ် Firmware ကို V14G သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီးတစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်။ တစ် ဦး ကကြီးမားတဲ့စက်! ဓာတ်ပုံတွင်သူ၌ပြိုင်ဘက်မရှိချေ။ ၎င်း၏ manual mode ကိုအရာအားလုံးပါ!
Daniel Toledo Castro အားပြန်ပြောပါ
ငါ veetical အတွက် cel ရှိပါကငါ queee အဖြစ် MJs ပေးပို့ဖို့ဒေါင်လိုက်ထားရန်ရှိသည်ငါ့ဆဲလ်၏အဝင်မျက်နှာ၌အလုပ်မလုပ်သို့မဟုတ် whatts အလုပ်မလုပ်? ငါ့ကိုဘယ်သူကူညီပေးနိုင်မလဲ
ငါ g4 ကိုလအနည်းငယ်အတွင်း 6.0 ကို update လုပ်တယ်။ charger ကနေ disconnect လုပ်လိုက်တာ။ နှစ်ချက်ထိ (သို့) back ခလုတ်နဲ့နိုးဖို့ခဏလောက်အချိန်ယူရတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းတာလဲ။ makina ဖြစ်ကောင်းငါ့ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုဤမျှလောက်နှောင့်အယှက်မပေးပါဘူးသော်လည်းဤပျက်ကွက်နှင့်အတူငါ့ကိုကူညီနိုင်
ဟယ်လို။ ငါ့မှာ g4 ရှိတယ်။ ၉ လမှာသူက application တွေ၊ သူပိုင်ဆိုင်ထားပုံရသည် သူသည်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်၊ အထူးသဖြင့်နံနက်ခင်းတွင်ဘက်ထရီမြင့်တက်နေသည်။ ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ?
ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာရှိနေတယ်၊ ​​LG G4 ကဖန်သားပြင်ကိုချိုးဖဲ့လိုက်တယ်၊ ဒါကငါ့လက်ဗွေကိုမသိဘူး၊ သူတို့ကငါ့ကိုဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်
Galaxy Tab E, Samsung မှနိမ့်နိမ့်တက်ဘလက်
Xiaomi သည် Redmi အကွာအဝေးတွင်ပထမဆုံးကိုယ်ပိုင်ချစ်ပ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်